Cuntada: Barnaamijka Isku-xirka Shabakada Bilaashka ah ee loogu talagalay Newbies iyo Real Pros
. Waxaa intaa dheer, isaga / iyadu daciif u ah xisaabta oo had iyo jeer eego siyaabo sahlan oo loo xoqo ama loo soo saaro xogta, isaga oo fulinaya hawlaha internetka. Haddii aad tahay qof aan barnaamijka ahayn oo wax ka qabta hawlo badan, waxaad isku dayi kartaa inaad isticmaasho software ama codsiyada si aad u xoqdo boggaga internetka.
Gawaarida waa kobcin xoog leh oo Google Chrome ah. Waa codsi sahlan oo la taaban karo oo lagu burburinayo hal bog ama dhowr bog oo wax ka beddelaya xogta lagu soo rogay masalan. Waxaad isticmaali kartaa barnaamijkan kaliya marka aad leedahay Chrome sida barta internetka ee ugu muhiimsan.
Gawaarida ayaa si toos ah u baari doonta boggagaaga internetka waxayna soo saaraan xog ku saleysan shuruudahaaga. Ma bixiso fursado tiro badan laakiin wuxuu leeyahay xidhiidh macmiil leh.
Twitter iyo Facebook APIs
adoo isticmaalaya Facebook iyo Twitter API, waa kuu sahlan tahay inaad ka soo qaadato xogaha laga helo tiro badan oo website ah. Waxaad sidoo kale falanqeyn kartaa goobaha tartankaaga iyo kormeerida ereyada muhiimka ah. API waa isku-xirka u oggolaanaya soddon qaybood oo ah qalabka barnaamijka si loo helo barnaamijyada warbaahinta bulshada. APIs ee labada Facebook iyo Twitter labadaba waxaa lagu dhex gelin karaa siyaabo kala duwan; waxaad soo ururin kartaa, scan kartaa, iyo soo saari kartaa macluumaadka asalaha warbaahinta bulshada sida aad rabto.
Waa mid awood leh oo ka mid ah kuwa ugu fiican shabakadda websaydhka iyo barnaamijyada macdanta macluumaadka. Soo dejinta. io waa lambarka xulashada mid ka mid ah kuwa aan barnaamijka ahayn iyo kuwa horumarinta codsiyada webka. Waxaad isticmaali kartaa qalabkan si aad u xoqdo xogta laga helo URL-yada kala duwan isla markaana waxaad abuuri kartaa API-gaaga oo ku saleysan shuruudahaaga. Iibsiga. Haa, dhab ahaantii waxaad heli kartaa natiijooyin la rabo dhawr ilbiriqsi. Barnaamijkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dooratid xogta oo aad ku qeexdo bogagga shabakadda iyada oo la adeegsanayo barta bidix-iyo-gujinta. Waxay sahamin doontaa bogagga internetka ee adiga kugu habboon si aad u hesho xogta saxda ah ee la soo saaro.
Kimono Labs waa qalabka kaliya ee liiska ku jira ee ku yimaada qaybaha bilaashka ah iyo kuwa la bixiyo. Haddii aad tahay non-programmer, waa inaad doorataa nooca bilaashka ah oo aadan u baahnayn inaad lacag badan ku bixiso mashaariicda saaridda xogta. Haddii aad tahay barnaamij-bixiye ama xirfadle xirfadle ah, waxaa lagugula talinayaa in aad isticmaasho nuqulkiisa mushaharkaaga ah kaas oo kugu kici doona wax ka soo jeeda 20 illaa $ 30 iyada oo ku saleysan shuruudahaaga iyo qorshaha aad doorato.
Codsiyada buqcad-celinta ee webkani waxay ku haboon yihiin barnaamijyadaa. Way fududahay in la isticmaalo oo la imaado taageerada internetka. Intaa waxaa dheer, dhammaan barnaamijyadani waxay xoqeen xogta laga helo goobaha aasaasiga ah iyo kuwa sare iyo blogs, iyaga oo aan wax u dhimeyn wakhtiga iyo tayada. Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, codsiyadani waxay wax ka beddeli karaan macluumaadkaaga iyo ka saaraan khaladaadka hingaadka si habboon Source .